# 1 Ubuntu Bug | Linux မှ
Ubuntu Bug # 1
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | GNU / Linux များ, အခြား
ဘာလဲသိလား အမှား # 1 ဒါကြောင့်တယ် Ubuntu ကို? လူအများစုကပင်ထိုအရာကိုစိတ်ကူး။ ပင်မရကြကြောင်းသေချာသည် မာကု Shuttleworth.
ငါ၌ဤစိတ်ဝင်စားဖို့အချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် humanOS ဘလော့ဂ် ငါကမင်းနဲ့မျှဝေချင်တယ် ကောင်းပြီ Ubuntu bug နံပါတ် ၁ နာမည်အရ Microsoft ကဈေးကွက်ဝေစုအများစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်, စပိန်လို Microsoft ကဈေးကွက်ဝေစုအများစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်, desktop PC ဈေးကွက်ကိုစီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်ဟူသောအချက်ကို bug တစ်ခုအဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ 😀
သူတို့ကဝင်ရောက်လျှင် bug ဖော်ပြချက် လူပေါင်း ၁၀၉၉ ဦး ကဤ bug သည်အဖွဲ့များအပါအ ၀ င်၎င်းတို့အားသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်ကိုသူတို့တွေ့မြင်နိုင်သည် Launchpad အဖြစ်: Linux Mint, OpenOffice, Linux ကို, Arch Linux ကို နှင့်ရှည်လျားသောစသည်တို့ကို.
bug ၏ဖော်ပြချက် Ubuntu # 1:
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည်လက်ရှိ desktop ကွန်ပျူတာဈေးကွက်၏အများစုဝေစုရှိသည်။
၎င်းသည် Ubuntu ကိုပြင်ဆင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော bug တစ်ခုဖြစ်သည်။
အခမဲ့မဟုတ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုတားဆီးနေသည် (အိုင်တီ)၊ ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေအနည်းငယ်အတွက်အိုင်တီလက်လှမ်းမီမှုကိုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်တီထွင်သူများ၏စွမ်းရည်အပြည့်အဝရရှိရန်စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ခြင်း။ ဤသည်အမှား PC စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်ထင်ရှား၏။
၁။ local PC store သို့သွားပါ။
၂။ ရောင်းရန်ကွန်ပျူတာအများစုတွင်အခမဲ့မဟုတ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တပ်ဆင်ထားသည်ကိုသတိပြုပါ။
၃။ Ubuntu နှင့်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲများတပ်ဆင်ထားသောကွန်ပျူတာအနည်းငယ်သာစောင့်ကြည့်ပါ။
(၁) ရောင်းရန်ရှိ PC အများစုသည် Ubuntu ကဲ့သို့သောအခမဲ့ဆော့ဝဲများသာပါဝင်သင့်သည်။
၂။ Ubuntu သည်၎င်း၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ကောင်းကျိုးများသိသာထင်ရှားစေရန်နှင့်စျေးကွက်သို့တင်ပို့သင့်သည်။
ဒီအစီရင်ခံစာဟာတစ်နေ့နီးကပ်လာမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။ ဟားဟား။ ငါတော့မထင်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Ubuntu Bug # 1
Ubuntu ကိုမင်းကန့်ကွက်နေတယ် ... 200 pcs ကြော်ငြာကိုမကြည့်ချင်ဘူး nova။ ဟားဟား!
Hahaha ကနယ်လ်ဆင်ကိုကြိုဆိုပါတယ် .. ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ KZKGGaara ကမကြာခင်မှာ NOVA နဲ့လေယာဉ်ပျံသန်းနိုင်မယ်၊ ငါတို့မှာကိုယ်ပိုင်မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာများနှင့် Chama hahahaha အတွက်လက်တော့တစ်လုံးတောင်ပါလိမ့်မယ် .. ကြည့်ဖို့တိုက်ရိုက်။
ကွန်ပြူတာအားလုံးမှာ Ubuntu ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားတာထက်အရာဝတ္ထုတွေကျန်နေသေးတာကိုကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်တယ်။
ငါ LINUX ကို pre-installed ချင်တယ်။ နှင့် Ubuntu … .. puuuufffff … ..
ubuntu ၏အမှားနံပါတ် (၁) သည်ပညာရှင်များ (နားလည်သောပညာရှင်များ) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် linux ကိုမတပ်ဆင်နိုင်ကြောင်းနှင့် ၀ င်းဒိုးများကပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုဆိုကြသည်။
သတိပေးချက် - ကျွန်ုပ်သည်လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောကွန်ပျူတာသည်အများသုံးဖြစ်ပြီးGüindous Siete ကိုအသုံးပြုသည်။
ကွန်ပျူတာများကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) မသုံးဘဲရောင်းချသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါလက်ရှိနေထိုင်သောတိုင်းပြည်၌, ထိုကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာများရောင်းချတဲ့စတိုးဆိုင်ရှိပါတယ်။ ငါအလုံအလောက်သိမ်းဆည်းထားသည့်အခါ, ငါသူတို့ထဲကတ ဦး တည်းကိုဝယ်ငါ LMDE အမည်ပါလိမ့်မယ်။ စတိုးဆိုင်တွင်၎င်းတို့သတိထားမိကြပြီးဆိတ်ကွယ်ရာတွင်လည်း၎င်းတို့သည်Güindous Siete ကို၎င်း၏ရုပ်ဆိုးသောဗားရှင်းများနှင့်အခြားဆော့ဖ်ဝဲများကိုလည်းရောင်းချကြောင်းဖော်ပြသည်။ သို့မှသာဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းက၎င်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
Xmoto - GNU / Linux အတွက်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်း
Ambiance Adium Theme - Empathy နှင့် Emesene တို့အတွက်လှပသောအသားအရေဖြစ်သည်